पशुपन्छीले पनि गर्छन् बलात्कार ! :: Kitab Kiro - Complete Book News
२०७७ असोज ४ गते दिप्सन लुइटेल
पशुपन्छीमा पनि विछोड हुन्छ ? के पशुपन्छीले पनि बलात्कार गर्छन् ? वन्यजन्तु पनि समलिंगी हुन्छन् ? जनावरले पनि संगीत सुन्छन् ? यी प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन सक्छन् ।
यी प्रश्नको उत्तर कहाँ भेटिएला ? प्रश्नमाथि उब्जिने अर्को प्रश्न हो यो ।
तर, लेखक ददि सापकोटाले यी र यस्तै विषयवस्तुलाई समेटेर पुस्तक नै तयार गरिदिएका छन् । उनले लेखेको 'वनको वैभव' प्रकाशनको तयारीमा छ ।
'वनको वैभव' पुस्तकमा जनावरका मनदेखि यौनसम्मका कुरालाई समेटिएको छ । पशुपन्छीबीचको प्रेम, विछोड, यौन मात्र होइन, पुस्तकमा त पशुपन्छीले कसरी बलात्कार गर्छन् भन्नेसम्मको कुरालाई समेटिएको छ । बोटबिरुवा कसरी तिर्खाउने कुरालाई पुस्तकमा रोचक ढंगले लेखिएको छ ।
खास पुस्तकमा वनको वैभव नै भएकाले पुस्तकको नाम नै 'वनको वैभव' जुर्‍यो ।
नामको विषयमा ददि भन्छन्, 'केही नामहरू सिफारिसमा आएका थिए । ती नामहरूमध्ये यो नाम मलाई उत्कृष्ट लाग्यो । त्यसैले यो नाम छानेको हुँ । नाम मैले नै जुराएको भने होइन ।'
ददिलाई 'वाइल्ड लाइफ'को विषयमा पुस्तक लेख्ने अहिलेको रहर हाेइन । उनले १८ वर्षअगाडि नै पुस्तक लेख्ने सोच बनाएका थिए । जुन रहर अहिले पूरा भएको छ ।
'मेरो यो पुस्तक लेख्ने सोच अहिलेको हाेइन, १८ वर्ष पहिला नै यस्तो विषयमा पुस्तक लेख्छु भन्ने सोचेको थिए', ददि भन्छन्, 'तर, यो बीचमा म पनि वाइल्ड लाइफको विषयमा थप बुझ्नतर्फ लागे । त्यसैले अहिले पुस्तक तयार गरेको हुँ ।'
पुस्तक तयार गर्नुको एउटै उद्देश्य छ, 'आफूले जीवजन्तुको विषयमा बुझ्न गर्नुपरेको दुःख अबकाे पुस्ताले नगरोस्' । पढ्ने जोसुकै पाठकले बुझोस् भन्ने हेतुले ददिले निकै सरल भाषामा पुस्तक तयार गरेका छन् । उनी भन्छन्, 'निराक्षरले पनि सुनेको भरमा बुझ्न सक्ने शैलीमा पुस्तक तयार भएको छ ।'
लेखक ददि सापकोटा
हरेक पशुपन्छीले बलात्कार गर्छ
लेखक ददि सापकोटाले पुस्तकमा पशुपन्छीले बलात्कार गर्ने विषयलाई पनि उठाएका छन् । घरपालुवा पशुपन्छीदेखि वन्यजन्तुले पनि बलात्कार गर्ने कुरालाई ददि दाबीका साथ बोल्छन् ।
उनी भन्छन्, 'घरमा पालिएको कुखुराको भालेले पनि पोथीलाई बलात्कार गरेको हुन्छ । जंगलमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, हामीले त्यसलाई बुझ्न जान्नुपर्छ ।'
'तपाईंले कसरी बुझ्नुहुन्छ ?'
'तपाईंलाई त्यो कुरामा चासो छ भने तपाईंले फरक तरिकाले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ । मैले पनि त्यसलाई फरक तरिकाले हेर्छु', जवाफमा ददि भन्छन्, 'पोथीले असहज महसुस गरेको मैले थाहा पाउन सक्छु । पोथी सहज हुन्न भने त्यो बलात्कार नै हो ।'
हाँसमाथि भएको बलात्कारको एक किस्सा ददिले बिर्सिएका छैनन् । केही वर्षअगाडि फ्रान्सको एक पार्कमा ददि मन भुलाइरहेका थिए । त्यहाँ एक पोथी हाँस आफ्नो छवटा चल्लाहरूसहित चरिरहेको थियो । एक्कासि तीनवटा भाले दौडिँदै पोथीतर्फ आए ।
ददिले पोथीले असहज महसुस गरेको पत्तो पाए, त्यहाँ बलात्कार हुने बुझेपछि उनी दौडिएर घर पुगे र क्यामेरा बोकेर आए । नभन्दै भाले हाँसले पोथी हाँसलाई बलात्कार गर्‍यो ।
त्यो सम्झिँदै ददि भन्छन्, 'भालेहरू आएको देख्नेबित्तिकै पोथी हाँसले निकै असहज महसुस गर्‍यो । डरायो । अनि मैले त्यहाँ बलात्कार हुन लागेको बुझेर त्यसलाई क्यामेरामा कैद गरे ।'
यस्तो घटना उनले धेरै जीवजन्तुमा देखेका छन्, त्यसैले त उनले पशुपन्छीले पनि बलात्कार गर्ने कुरालाई दाबीका साथ बोल्ने गर्छन् ।
केही जीवजन्तुले आफूलाई बलात्कारीबाट कसरी सुरक्षा दिन्छन् भन्ने कुरालाई पनि ददिले 'वनको वैभव'मा समेटेका छन् ।
ददि पशुपन्छी तथा जीवजन्तुमा पनि प्रेम, विछोड, ईर्ष्या, साथीत्व हुने बताउँछन् । जुन कुरालाई उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । जनावरले संगीत कसरी सुन्छ भन्ने विषयलाई पनि उनले पुस्तकमा रोचक तरिकाले लेखेका छन् ।
पुस्तक बच्चाले नपढेको राम्रो
'वनको वैभव : जनावरको मनदेखि यौनसम्म' । पुस्तकको नाममा नै यो स्लोगन उल्लेख गरिएको छ । विषयवस्तुहरू र लेखनशैली हेर्ने हो भने यो पुस्तक बच्चाहरूप्रति लक्षित हो कि भन्ने लाग्छ ।
तर, ददि यो पुस्तक बच्चाहरूमा लक्षित नभएको बताउँछन् । उनी त यो पुस्तक बच्चाहरूले नपढनून् भन्ने चाहन्छन् ।
'पुस्तकमा मैले जीवजन्तुको यौनको विषयमा लेखेको छु, बलात्कारको विषयमा लेखेको छ', ददि भन्छन्, 'यी कुराहरूले बच्चाको दिमागमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । त्यसैले सकेसम्म यो पुस्तक बच्चाहरूले नपढून् ।'
आफ्नो लक्षित पाठक भनेको नै वाइल्ड लाइफमा रुचि राख्नेहरू भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'यो पुस्तक अरु उपन्यस, कथा, कविताजस्तो बिक्री हुने पनि होइन । यसका पाठक सीमित छन्, जसले यस्ता कुराहरूमा रुचि दिन्छ, उनी मेरो लक्षित पाठक हो ।'
फ्रान्समा बसेर पुस्तक लेख्ने जोश
ददि अहिले फ्रान्समा छन् । उनी लामो समयदेखि फ्रान्समा नै बस्दै आएका छन् । उनले यसअघि सार्वजनिक गरेका तीन पुस्तक पनि उनले फ्रान्समा नै रहेर लेखेका हुन् ।
फ्रान्सजस्तो देशमा घण्टा-घण्टामा पैसा कमाइ हुने ठाउँ । तर, त्यहाँ पुगेर पनि ददि कहिल्यै पैसाको पछि कुदेनन् । उनले आफ्ना इच्छाहरूलाई मर्न दिएनन् ।
'मेरो यहाँ बाँच्न नसक्ने अवस्था छैन । यदि त्यस्तो थियो भने मैले पैसाका लागि काम गर्थें होला', ददि भन्छन्, 'म जे गर्छु, मनले खाएको गर्छ । पुस्तक पनि मनदेखि लेख्न मन लागेर लखेको हुँ । नत्र त म पनि लेख्न छोडेर पैसाको पछि दगुर्थें होला ।'
ददि नेपालमा हुँदा मात्र होइन, फ्रान्समा पनि विभिन्न जंगलमा दौडिरहन्थेँ । फ्रेन्च साथीसँग उनी धेरै दिनसम्म जंगलमा नै बसेको अनुभव उनीसँग छ । ददि भन्छन्, 'यहाँ मेरो मिसेल भन्ने साथी छ, जो वाइल्ड लाइफ भनेपछि मजस्तै पागल छ । ऊ र म २१ दिनसम्म जंगलमा सँगै बसेका छौँ ।'
त्यो समय उनीहरू वन्यजन्तुको व्यवहार, उनीहरूले गर्ने यौनदेखि हरेक कुरालाई सुन्थे, रेकर्ड गर्थे, टिप्थे । कैयौँ रात लाटोकोसेरो समातेर उडाएका छन् उनीहरूले ।
ददि भन्छन्, 'हामी हरेक जीवजन्तुको क्रियाकलाप बुझ्थ्यौँ । लुकी-लुकी उनीहरूलाई नियाल्थ्याैँ र त्यसको फोटो लिन्थ्यौँ, अडियो/भिडियो लिन्थ्यौँ ।'
आफूले २५० पेजको १३ वटा डायरीमा जीवजन्तुको विषयमा नोट टिपेको ददि बताउँछन् । त्यो भोगाइ र त्यो अध्ययनले अहिले फ्रान्समा नै बसेर पनि पुस्तक लेख्न सहज भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, 'मलाई पुस्तक लेख मात्रै भन्ने हो भने म धेरै वटा पुस्तक तयार गर्न सक्छु । तर, जे पायो त्यहीँ लेख्न मनले मान्दैन ।'
एसएलसी फेल भएपछि यात्रा 'वाइल्ड लाइफ'तर्फ मोडियो
ददि र उसका दाइ सँगै पढ्थे । एसएलसीमा उनको दाइ पास भए । तर, ददिले एसएलसी पास गर्न सकेनन् ।
असफल छोरोलाई बुबाले राम्रो मानेनन् । परिवारमा केही खटपट भयो । ददिलाई परिवारमा बस्ने मन भएन । त्यसैले उनी सौराह पुगे । सौराहमा उनी एक होटलमा काम गर्न थाले ।
एक दिन सौराहको उक्त होटलमा फ्रेन्च जोडी आइपुगे । अंग्रेजी राम्रो बोल्न नजान्ने ददिले उनीहरूको हातै समातेर गौँडासम्म पुर्‍याए र भने, 'राइनो राइनो' ।
ददिको उक्त व्यवहारलाई फ्रेन्च जोडीले रुचाए र उसका बारेमा थप बुझ्न थाले । ददिले कनीकुथी आफू एसएलसी फेल भएकोसम्म जवाफ फर्काए ।
पढाइ छोडेको बुझेपछि फ्रेन्च जोडीले नै उनलाई पढ्नका लागि ८ हजार रुपैयाँ दिए । ददि घर फर्किए र पुन: एसएलसी दिएर पास पनि भए ।
एसएलसी पास भएपछि पुन: ददि सौराह पुगे । त्यही काम गर्ने सोच बनाएर उनी सौराह पुगे । त्यो समय उनले टुरिस्ट गाइडको काम गर्ने मौका पाए ।
एक दिन एक भ्रमण टोलीलाई ददिले थारू नृत्यको विषयमा बताइरहेका थिए । एक जना अमेरिकन गाडा चढेर त्यहाँ आइपुगे । ददिले अरुलाई बताइरहेको कुरा उनले निकै चाख दिएर सुने ।
ददिसँग प्रभावित भएका ती व्यक्ति उनकै होटलमा बस्न सुरिए । खाली नै नभएको उक्त होटलमा ददिले आफ्नो रुम छोडेर उनलाई बस्न दिए ।
भोलिपल्ट एक टोलीलाई लिएर ददि जंगल जानुपर्ने थियो । ती अमेरिकी पनि ददिसँगै जंगल जान खोजे । टोलीलाई फकाएर ती अमेरिकी पनि सँगै जंगल हिँडे ।
जंगलमा देखेको, ददिले सुनाएको/बुझाएको हरेक कुरालाई उनले नोटमा टिपेका थिए । त्यो देखेर ददिलाई शंका लाग्यो, 'कतै यो मान्छे पत्रकार त होइन ?'
ती व्यक्ति 'वाइल्ड लाइफ'को विषयमा पुस्तक लेख्न रिसर्चका लागि नेपाल आएका रहेछन् । उनले ददिलाई दिनको ८ सय पारिश्रमिक दिएर आफ्नो को-रिसर्चको रुपमा काम गराए । १५ दिन उनीहरू सँगै डुले ।
त्यो समय ती अमेरिकीले नै ददिलाई 'वाइल्ड लाइफ'को रिसर्चको विषयमा सिकाए । ददिलाई पनि रुचि भइरहेको विषय भएकाले उनले पनि खुबै चासो दिए । त्यो माथि ती अमेरिकनले ददिलाई वाइल्ड लाइफको थुप्रै पुस्तक दिए । ती पढेर पनि ददिलाई वाइल्ड लाइफमा रुचि गढ्याे ।
त्यो बेला नेपालमा वाइल्ड लाइफको पुस्तक नै थिएन । ती अमेरिकनले भन्ने गर्थे, 'अब नेपालका लागि नेपाली भाषामा तैँले नै पुस्तक लेख्नुपर्छ ।'
आखिर ददिले ती अमेरिकी साथीको पनि सपना साकार पार्दै छन् । ददिले यसअघि नै वाइल्ड लाइफसँग सम्बन्धित 'पन्छीजगत्' लेखिसकेका छन् भने 'वनको वैभव' दसैँसम्म बजारमा आइसक्नेछ ।
Copied from: www.shilapatra.com